Kooxaha jabsada Computerada oo la sheegay in fara kulul ay ku hayaan in ka badan 150 Dal. | Radio Danan (DBN) 94 FM
Home / WARARKA / Kooxaha jabsada Computerada oo la sheegay in fara kulul ay ku hayaan in ka badan 150 Dal.
Kooxaha jabsada Computerada oo la sheegay in fara kulul ay ku hayaan in ka badan 150 Dal.
Posted by: DBN in WARARKA, WARARKA CAALAMKA May 15, 2017	Comments Off on Kooxaha jabsada Computerada oo la sheegay in fara kulul ay ku hayaan in ka badan 150 Dal.
15.06.2017: Laanta Booliska Yurub ayaa sheegtay in weerarkani uu saameeyey ugu yaraan 100,000 kun oo hay’adood oo ku kala yaalla illaa 150 waddan, iyadoo dalka Kenya oo Soomaaliya deris la ah ay ku jirto dalalka uu saameeyey Viriskan.
madaxda dowladda Somaliya ayaa digniin ka soo saartay Kooxaha Computerada Jabsada oo weerar ku qaaday in ka badan 150 waddan oo caalamka ah, iyadoo maanta oo Isniin ahna uu weerarkaasi sii faafay.
Wasaarada Boostada iyo isgaarsiinta Somalia ayaa shacabka Soomaaliyed uga digtay iney iska ilaaliyaan Viruska loo adeegsado in lagu xirto Computerada, iyadoo talooyin dhowr ah soo jeedisay.
Wasaarada Boostada, isgaarsiinta Somalia ayaa shacabka Soomaaliyed gaar ahaan shirkadaha ganacsiga iyo heyadaha dowlada u soo jeedisay talooyin muhiim ah si ay isaga ilaaliyaan Viruskan, waxaana ka mid ah talooyinkaas iney cusboneysiiyaan anti-virusyada ku jira Computerada, iney keydsadaan xogaha muhiimka ah iyo ineysan Furin emailo aysan garaneynin.
“Waxaa dhacaysa in marka kooxdani Computerka jabsato inay qafilanayaan macluumaadka iyo xogta kuugu jirta Computerka iyaga oo dalbanaya in la siiyo madax furasho” ayuu yiri howlwadeen ka tirsan wasaarada boostada iyo isgaarsinta Somalia.
Dhinaca kale, Illaa haatan horumar xooggan lagama samaynin sidii loo ogaan lahaa cidda weeraradan soo qaadday.
Khubarada dhinaca ammaanka Computerada ayaa sheegay in computerada gaar ah ee isticmaalaya barnaamijyadii u dambeeyey inay ka badbaadi karaan weeraradan, waxayse ku booriyeen dawladaha iyo shirkadaha waweyn inay hubiyaan hannaanka ammaanka Computerada ama inay keensadaan nidaam cusub oo ay kaga hortegi karaan weerarada noocana.
Khubaradan dhinaca amaanka Computerada ayaa ka digay in shirkadaha la jabsaday Computer-adooda, inaanay madaxfurashada laga dalbaday ee gaadhaysa illaa $300 aanay ku bixinin nidaamka lacageed ee Bitcon, taasoo keeni karta inaan la tixraaci Karin cidda lacagtaas la siiyey.
Kooxaha weerarka geystay, marka ay la wareegaan Computerkaaga waxaa dhacaysa inay ku siiyaan fursad ah, inaad lacagta ku bixiso muddo toddoba maalmood ah, haddii aad bixin waydo, waxaa dhacaysa inay tirtirayaan dhammaan macluumaadka Computerkaas kuugu jira.
Previous: Gudoomiyaha Gobolka Benadir oo La sheegay In Is Bedel Uu ku Samayn Doono Gudoomiyaasha Degmo ee Gobolka Benadir.
Next: Deg-Deg: Is Rasaaseyn Culus Oo Goor Dhow Ka dhacday Magaalada Muqdisho.